Yuunivarsitii Aksuumiitti barataan tokko ajjeefamee hedduun madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdee Yunivarsitii Aksuumitti uumamee tureen barataan Mekaanikaal Injinariingi waggaa lammaafaa kan ta'e tokko ajjeefamee hedduun miidhamuu dhagahame.
Waldhabdee barattootta gidduutti uumameen, barataan waggaa lammaffaafi maqaansaa Yohannis Maasirashaa Siyife jedhamu ajjeefamuu isaa ibsuun yuunivarsitichi beeksisa gaddaa maxxanseera.
Kana malees barattoota biraa hedduurra madhaan gahuusaa hime.
Dhimmicharratti hoggantoota yuunivarsiticharraa odeeffanno dabalataa argachuuf yaaliin taasifne nuuf milkaa'u baatulleen, hojjataan Hospitaala Olaanaa Aksuum akka maqaansaanii hin eeramne barbaadan tokko barataan tokko ajjeefamausaa BBC'f mirkaneessaniiru.
Yuunvarsitii Dabra Maarqositti barataan tokko ajjeefame, kaan madaa'an
Dabalataanis barattoonni miidhaan irra gahee hedduun wal'aansa argachuuf gara hospitaalichaa dhaquusanii oggeessichi himeera.
Balaa kanaan durattis ajjeechaa barataa Sa'aare Abrahaa, barataa Ikonomiksii waggaa sadaffaa torbee darbe yuunivarsitii Dabramaarqoosiitti ajjeefamee mormuun barattoonni magaalaa keessatti hiriira bahanii turan.
Poolisiinis hiriiricha ittisuuf gaazii boosisaatti fayyadamuunsaa himameera.
Jeequmsi uumamuun barataan tokko kan ajjeefameefi kaan ammoo kan miidhaaf saaxilaman isaan booda ta'u namoonni ijaan argan BBC'tti himaniiru.
Bartoonni gocha kana keessatti hirmaataniiru jedhamanis poolisiin to'annoo jala olfamusaanii kan ibsame yoo ta'u, motummaan Naannoo Tigiraay kaleessa galagala keessa ibsa baaseen, du'a barataa kanaatiin gadda olaanaa itti dhagaahame ibseera.
Kana malees gochicha waan sukanneessaa jechuun ibsuun gochicha cimsee akka mormuufi yaalii qaamota kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf taasifamuuf deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisu beeksiseera.